COVID-19 Management Program natolotry ny Premier Medical Laboratory Services ho valin'ny mandat vaccine Biden
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » COVID-19 Management Program natolotry ny Premier Medical Laboratory Services ho valin'ny mandat vaccine Biden
Premier Medical Laboratory Services (PMLS), dia manambara anio ny fanombohan'izy ireo ny programa fitantanana COVID-19, Keep America Thriving, natao hanampiana ireo fikambanana lehibe hanaraka tsara ny Bate Administration Vaccine Mandate. Ny vaovao NBC dia nitatitra fa azo nofaranana hatramin'ny fiandohan'ity herinandro ity. "Ny Sampan-draharaha misahana ny fiarovana sy ny fahasalamana (OSHA) dia niasa mba hamorona fenitra vonjimaika vonjimaika izay mandrakotra ny mpampiasa manana mpiasa 100 na mihoatra mba hiantohana ny vaksiny feno na hiatrika fitsapana isan-kerinandro ny mpiasan'izy ireo," hoy ny Departemantan'ny asa.
Premier Medical Laboratory Services (PMLS), dia manambara anio ny fanombohan'izy ireo ny programa fitantanana COVID-19, Keep America Thriving, natao hanampiana ireo fikambanana lehibe hanaraka tsara ny Bate Administration Vaccine Mandate. Vaovao NBC nitatitra fa mety ho vita hatramin'ny fiandohan'ity herinandro ity. "Ny Sampan-draharaha misahana ny fiarovana sy ny fahasalamana (OSHA) dia niasa mba hamorona fenitra vonjimaika vonjimaika izay mandrakotra ny mpampiasa manana mpiasa 100 na mihoatra mba hiantohana ny vaksiny feno na hiatrika fitsapana isan-kerinandro ny mpiasan'izy ireo," hoy ny Departemantan'ny asa.
Ny fepetra takian'ny Filoham-pirenena dia mihatra amin'ny orinasa maherin'ny 130,000 manerana an'i Etazonia ary mety hisy fiantraikany amin'ny mpiasa 80 tapitrisa manerana ny firenena. Na izany aza, miaraka amina Amerikanina maro mbola misalasala momba ny vaksininy, ny mandat dia antenaina hametraka olana lehibe amin'ny fotodrafitrasa fitsapana ny firenena noho ny fitomboan'ny fangatahana fitsapana COVID-19. Raha raisina izany, ny PMLS dia vonona amin'ny iray amin'ireo fahafaha-manao fanandramana lehibe indrindra eto amin'ny firenena sy ny famokarana an-trano ho an'ny fitaovam-pitsapana tsy voafetra.
"Rehefa nihena ny laboratoara hafa nandritra ny fotoana fohy tamin'ny tranga nandritra ny fahavaratra noho ny fihenan'ny fangatahana fanandramana dia tsy nanao izany izahay," hoy i Kevin Murdock, CEO sy mpanorina ny PMLS. “Nanohy nanatsara ny fahafaha-manaonay ho toy ny laboratoara izahay hiomanana amin'ny fitsangatsanganana hafa toa ilay atrehantsika ankehitriny. Noho io antony io dia vonona izahay hikirakira be loatra noho ny ankamaroan'ny laboratoara manerana ny firenena. ”
Ny alàlan'ny alàlan'ny automated PMLS miaraka amin'ireo fitaovan'ny laboratoara manara-penitra dia nahafahan'izy ireo nandamina fitsapana COVID hatramin'ny 300,000 isan'andro niaraka tamin'ny 98% ny valiny nomena tao anatin'ny 24 ora. Ny ekipan'ny mpahay siansa PhD malaza dia nandray anjara lehibe tamin'ny valin'ny COVID-19 an'ny firenena. Noho io antony io, ny PMLS dia mpiara-miombon'antoka fitiliana azo antoka ho an'ny ekipa fanatanjahan-tena matihanina, sekoly sy oniversite, orinasa lehibe ary departemanta ara-pahasalamana manerana ny firenena.
Miaraka amin'ny fotodrafitrasa mandroso misy azy ireo, ny programa Keep America Thiving an'ny PMLS dia natao manokana ho an'ireo orinasa mpamokatra, ivon-toerana fizarana sy fanatanterahana, fivarotana ambongadiny, fananganana ary fikambanana misy asa lehibe ao amin'ny birao. Keep America Thiving dia manolotra ireto manaraka ireto:
Fandaharam-pizahana turnkey namboarina ho an'ny famatsiana kitapo fitsapana tsy tapaka ho an'ny valiny haingana sy marina
Fampiofanana eo an-toerana sy fakan-kevitra amin'ny fomba fitiliana mety sy paikady namboarina ho an'ny fepetra fitiliana mahomby indrindra
Fitsapana PCR izay azo tehirizina eo an-toerana